Mayelana NATHI - Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd.
I-Shenzhen Herbin Ice Systems Co., Ltd. yatholakala ngo-2006. Bekulokhu kugxilwe ekuthuthukiseni ubuchwepheshe bemishini yeqhwa kusukela lapho, kufaka phakathi umshini weqhwa we-flake, umshini we-tube ice, umshini we-block block njalonjalo.
Senza imisebenzi emihle nge-OEM / ODM yama-evaporator e-flake ice, imishini yeqhwa le-flake, imishini ye-tube ice, imishini yeqhwa evimba. Imikhiqizo yethu yamukelwa ngokufudumele ngabalingani bethu bebhizinisi emhlabeni jikelele.
Ubuchwepheshe beqhwa lomshini weqhwa:
Sakha ama-evaporator e-flake ice eChina, futhi sidayisa ama-evaporator e-flake eqhwa ezinkampanini eziningi zomshini weqhwa waseChina, axhumanisa ama-evaporator eHerbin nezindawo zawo zokupholisa ukwenza imishini yeqhwa le-turnkey flake endaweni emazweni ahlukahlukene emhlabeni wonke.
Ngaphezu kwe-60% yemishini yama-ice flake yaseChina ifakwe ama-evaporator e-Herbin flake ice.
I-Herbin flake ice evaporators isivele isetshenziswe umhlaba kabanzi.
Khonamanjalo, inkampani yakwaHerbin yaqala ukusebenzisa i-Chromed silver alloy ukwenza i-evaporator kusukela ngo-2009 ukwenza ngcono ukushisa kwe-ice flap ice evaporator. Lolu hlobo lwe-alloy yesiliva luyinto ekhetheke kakhulu, enelungelo lobunikazi yiHerbin Ice Systems. Le nto entsha ithuthukise ukuqhutshwa kokushisa ngama-40% uma kuqhathaniswa neminye imishini yamaqhwa e-Chinese flake, futhi ivimbela ukungasebenzi kahle ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside.
Tube umshini weqhwa ubuchwepheshe:
Izinhlelo zeHerbin Ice zaqala ukufunda isipiliyoni kumshini we-Vogt tube ice kusukela ngo-2009.
Sathenga i-P34AL esetshenzisiwe ngoJulayi 20, 2009 kwaXiaobang Ice plant (Isitshalo seqhwa esikhulu kunazo zonke eShenzhen). Saqaqa imishini yeqhwa le-tube, futhi sakopisha ngayinye into eyodwa, efana nomqondisi wokugeleza kwamanzi, inzwa yezinga le-liquid ku-evaporator, uhlelo lokuhambisa uwoyela lwe-compressor, uhlelo lokuhambisa uketshezi oluqinile, ama-valve wengcindezi njalo, uhlelo olusebenzayo lokuhambisa kabusha nakho konke.
Ngokuya ngesipiliyoni seVogt, siqale ukuhlola nokwenza ngcono umshini wethu we-tube ice ngo-2010.
Siba ngabakhiqizi abaphambili bomshini weqhwa eChina ngo-2011.
Ubuchwepheshe obuphakeme, ikhwalithi ephezulu nentengo enhle kwenza inkampani yakwaHerbin ikhule ngokushesha okukhulu emakethe yomshini weqhwa leqhwa.
Vimba ubuchwepheshe bemishini yeqhwa:
Ngaphambi kuka-2009, sigxila emshinini wendabuko we-brine pool block block.
Siqale ukukhiqiza umshini weqhwa oqondile weqhwa kusukela ngo-2010.
Lo mshini omusha we-block block ice wonga amandla, uzinzile.
Okwamanje, sinikezela ngemishini yokupakisha iqhwa, amakamelo eqhwa, amakamelo abandayo, ama-chiller amanzi, amasistimu wamanzi ahlanzekile, izikhwama zesikhwama, imishini yokwenza iqhwa, ama-vacuum chillers njalonjalo, Futhi sikulungele kakhulu lokho.
(1) Inani eliyinhloko le-HERBIN: Dala inani lamakhasimende futhi wakhe izinzuzo zomphakathi!
(2) UHERBIN unamathela kwifilosofi yebhizinisi "Yekhwalithi yokuqala, Idumela kuqala, Insizakalo kuqala", izoqhubeka nokwenza okusha nokuthuthuka, ilwele ukwenza ngcono ukuncintisana kwamazwe omhlaba kwemishini yokwenza iqhwa, futhi ibe ngumkhiqizo wokwenza iqhwa lomhlaba wonke .
Yonke imishini yeqhwa yenzelwe ukuba ibe namandla kakhulu, ngakho-ke ingaphila kahle kakhulu ngesikhathi sokulethwa kusuka efektri yethu kuya endaweni yamakhasimende. Akukho ukugqashuka kwepayipi, akukho ukuqhekeka ezindaweni zokushisela, akukho okuxegayo ngemuva kokuthunyelwa kolwandle okuxakile kanye nokuthuthwa komgwaqo.
Yonke imishini yeqhwa izodlula ukuhlolwa kwamahora angama-72 ngaphambi kokuthi ilethwe kumakhasimende.
UHerbin unikeza iwaranti yezinyanga ezingama-24 kuyo yonke imishini yeqhwa.
Siphinde sibe nethimba lensizakalo elisebenza ngemuva kokuthengisa ukusiza abasebenzisi ukufaka imishini yeqhwa. Isevisi yokubonisana nge-inthanethi imahhala ukuthola isikhathi eside.
Abantu e Herbin Ice Systems:
(1) UHerbin umsunguli wenkampani, futhi wasebenzisa igama lakhe ukuqamba inkampani. UHerbin manje ungumphathi jikelele wenkampani futhi uthumela umsebenzi oyinhloko wenkampani mayelana nokukhiqiza.
(2) UMike Li unguMqondisi Wezokuthengisa, ophethe ukuthengiswa kwale nkampani emakethe yaseChina neyaphesheya kwezilwandle. UMike unolwazi lokuthengisa embonini yomshini weqhwa iminyaka engaphezu kwengu-10, ngaphambi kwalokho wathola iziqu ze-HAVC Major eZhanjiang Ocean University.
IZhangjiang Ocean University idume nge-HAVC Major yayo eseNingizimu yeChina.
Ukuqinisekiswa kwemishini yeHerbin Ice.
Yonke imishini yeqhwa le-Herbin inesitifiketi se-CE, SGS, UL ...
Umshini weqhwa likaHerbin unamalungelo obunikazi angaphezu kwama-70, njenge-patent yempahla entsha ye-flake ice evaporator, umshini weqhwa we-flake okhukhulayo, imishini ye-tube ice nokunye.
(1) Iminyango kaHERBIN ifaka phakathi: uMnyango Wezentuthuko, uMnyango Wokuthenga, uMnyango Wezokukhiqiza, uMnyango Wekhwalithi, uMnyango Wezohwebo
(2) UMnyango Wezentuthuko: Ubhekele ukuthuthukiswa kwekhwalithi yomshini weqhwa, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe beqhwa, ukuthuthukiswa kokonga ugesi nokunye;
Umnyango Wokuthenga: Ukuthengwa kwezesekeli ezihambisanayo nezesekeli zemishini yeqhwa, njenge-compressor, imikhumbi yengcindezi, ama-valve wokunweba, i-condenser, njalonjalo.
Umnyango Wezokukhiqiza: Ubhekele ukukhiqizwa kwemishini yeqhwa nemishini ehlobene nayo.
Umnyango wekhwalithi: Hlola ikhwalithi yemishini yeqhwa. Futhi ubheke ukusetshenziswa kukagesi komshini ngamunye.
UMnyango Wezebhizinisi: Thengisela amakhasimende imishini yemishini yeqhwa efanelekayo
Umnyango wenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa: Ubhekele ukufakwa, ukunakekelwa kwemishini yeqhwa ethengiwe, kanye nensizakalo eku-inthanethi yazo zonke izindaba eziphathelene nemishini yokwenza iqhwa.
Ukwethulwa kwamandla wokukhiqiza wenkampani
Isingeniso semishini nobuchwepheshe
Inkampani yakwaHerbin inezintambo zayo ezi-3 ezivundlile ezincane, ama-lathes amakhulu ama-2 amile mpo, umshini wokushisela ogcwele othomathikhi, imishini yokuwelda eyi-15, i-3 plate cutting & umshini wokugoba, indawo eyodwa yokuwasha i-asidi, i-Nickel eyodwa ne-chrome plating pool, umhubhe owodwa wokulashwa kokushisa, owodwa umshini wokugcwalisa i-polyurethane (PU) .........
Ama-lathes nabasebenzi abanolwazi baqinisekisa ukuthi ama-evaporator e-flake ice ngokubhinca okuhle kakhulu.
Ukwelashwa okushisa ukushisa kuqinisekisa ukuthi i-flake ice evaporators ayinayo inkinga ngemuva kokusebenzisa isikhathi eside. Ukuwashwa kwe-acid okuphelele kanye ne-nickel ne-chrome plating kuvumela ama-evaporator ukuthi asebenze ngokuzinzile iminyaka engaphezu kwengu-20.
Sinabantu abangaphezu kuka-50 abasebenza ngobuchwepheshe ngemishini eshiwo ngenhla, futhi singenza amasethi amaningi ama-5-20 ama-flake ice evaporators nsuku zonke.
Sine onjiniyela 2 for umthamo omncane ukusetshenziswa commercial imishini iqhwa flake, 2 engineer for umthamo umthamo imishini iqhwa flake enkulu, 3 onjiniyela for tube ice imishini kanye neminye imishini ice nobuchwepheshe obuphakeme.
Ngokwesilinganiso, njalo ngesonto, sizothumela amasethi angama-200 emishini yokusebenzisa i-flake ice imishini emincane yokusebenzisa amandla. 5-10 amasethi emishini yeqhwa le-flake enkulu kune-5T / ngosuku. Amasethi ama-3-5 wemishini ye-tube ice enkulu kune-3T / ngosuku.
UHerbin wakhe ubudlelwano obuqinile nabaphakeli bezinto, njengeBitzer, Frascold, Refcomp, Danfoss, Copeland, Emerson, O&F, Eden, njalonjalo.
Imishini ye-Herbin ice isetshenziswa kabanzi emhlabeni jikelele.
Isibonelo, ama-95% emishini yeqhwa elenziwa nge-Made-in-Turkey ifakwe ama-evaporator e-Herbin flake ice yizinkampani zendawo zakwaSogutma.
Imishini engama-65% eyenziwe e-China yemishini yeqhwa ifakelwe ama-evaporator e-Herbin flake ice.
Imishini engama-30% yemishini yeqhwa yobuchwepheshe obuphezulu e-East Asia ivela kuHerbin Ice Systems, njengePhilippines, i-Indonesia, iMalaysia, iVietnam, iCambodia, iLaos .....
Amashubhu eqhwa adliwa njengokudla empilweni yansuku zonke kulawo mazwe.
Ama-80% wezikebhe zokudoba zaseChina anemishini yeqhwa lamanzi olwandle i-Herbin.
IHerbin ingumhlinzeki womshini omkhulu weqhwa wezohwebo weCarrefour, iWal-Mart, iTesco, iJiajiayue, kanye nezinye izitolo ezinkulu zeChain. Ama-ice flakes asetshenziselwa ukuthengisa ukudla kwasolwandle, inhlanzi, ukuhlangana njalonjalo.
Umshini omkhulu weqhwa likaHerbin nomshini we-tube ice usetshenziswa kakhulu yiSanquan Foods, iShineway Group, nezinye izitshalo zokulungisa ukudla.
Inkampani kaHerbin inabamele namahhovisi eMiddle East, South Africa, East EU, Northern EU njalonjalo.
1. Umkhiqizo ukubonisa
Imikhiqizo ihlukaniswe ngemikhiqizo yakamuva, imikhiqizo ekhethekile nemikhiqizo ejwayelekile.
(1) Imikhiqizo yakamuva: Imikhiqizo yethu yakamuva iyimishini yokonga amandla e-flake ice. Ngokusebenzisa okokusebenza okusha ukwenza ama-evaporator e-flake ice, imishini yethu yeqhwa elisebenzisa i-flake isebenzisa ugesi ongu-75KWH kuphela ngokwenza wonke amathani ama-1 ama-flakes e-ice (Kususelwa ku-30C kuma-20C nakuma-20C angenawo amanzi. Eminye imishini yamaqhwa ama-Chinese flake idla okungenani u-105KWH kagesi ngokwenza ithani elilodwa le-ice flakes.
Siphinde sathengisa imishini yohlobo lwe-flake ice type, futhi badla ugesi ongu-65KWH ngokwenza ithani elilodwa leqhwa ngokwesilinganiso.
(2) Imikhiqizo ekhethekile: Sinentengo ekhethekile yemishini ye-5T / day tube ice ngo-2020. Futhi sihlala sinalo lolu hlobo esitokweni. Singahlala sidayisa umshini we-5T / day tube ice ngentengo engcono kakhulu emhlabeni, futhi basesitokweni. Sidinga izinsuku eziyi-18 kuphela zokwenza umshini omusha we-5T / day tube ice kusuka ku-0.
(3) Imikhiqizo ejwayelekile: Imishini ejwayelekile yokuhweba i-flake ice amakhono amancane, futhi sigcina inani elikhulu lemishini yeqhwa elincane esitokisini. Zizinzile futhi zinesikhathi eside kakhulu senkonzo, zithengiswa njengenja eshisayo nsuku zonke.
2. Incazelo ejwayelekile yomkhiqizo
Commercial use small capacity flake ice imishini isetshenziswa kakhulu esitolo, erestaurant, ukugcina ukudla kuhlanzekile.
Imishini emikhulu yeqhwa le-flake / imishini yeqhwa le-tube ijwayele ukusetshenziselwa ukucubungula ukudla. Futhi iqhwa lengezwa ekudleni ngqo ngesikhathi sokuqhutshwa kokuhlangana.
Imishini emikhulu yeqhwa le-flake nemishini ye-tube ice nayo eyokuhweba ngeqhwa. Izitshalo zeqhwa zithengisela abantu abadobayo iqhwa le-flake, noma zithengise amashubhu eqhwa agxiliwe ekhofi / ezindaweni zokuphuza utshwala / emahhotela / ezitolo zeziphuzo ezibandayo / ezitolo nokunye.
Imishini yethu yeqhwa isetshenziselwa isuphamakethe enkulu, ukucubungula inyama, ukucubungula ukudla kwasemanzini, ukuhlatshwa kwezinyoni, imboni yesikhumba, imboni yamakhemikhali edayi, ukunciphisa izinga lokushisa emayini, i-Bio-pharmacy, amalebhu, indawo yezokwelapha, ukudoba olwandle, amaphrojekthi wokwakha ukhonkolo njalonjalo .
Ngaphandle kobuchwepheshe obusha sha, imishini yethu yeqhwa le-flake ingu-30% yokonga amandla kakhulu kuneminye imishini yamaqhwa e-Chinese flake. Uma umsebenzisi ekhetha umshini wami weqhwa we-20T / day flake, uzosebenzisa ama-USD 600,000 angaphansi kwemali kagesi eminyakeni engama-20. Uma ekhetha omunye umshini weqhwa we-Chinese flake, uzosebenzisa ama-USD 600,000 ngaphezulu ukukhokhela ugesi futhi angatholi lutho. Izinga elifanayo leqhwa, nenani elifanayo lamaqhwa eqhwa.
Imishini yethu ye-tube ice ithuthukiswa ngokususelwa kuzinhlelo ze-Vogt's tube ice. Banokulawulwa okuphelele kwezinga loketshezi ku-evaporator, ukuhlinzekwa ketshezi okuhlakaniphile, ukusakazwa kukawoyela okushelelayo, uhlelo olusebenzayo lokwehlisa amanzi, futhi asikho isiqandisi esiwuketshezi esibuya ku-compressor .........
Yonke leyo misebenzi eningiliziwe yenziwe kahle futhi uzoba nemishini yeqhwa enhle kakhulu evela kuHerbin Ice Systems.
Sine imishini ice nge ejwayelekile Chinese, EU standard, USA ejwayelekile .....
Emishinini yeqhwa ene-EU ne-USA ejwayelekile, imibala yocingo kufanele ilandele imithetho ye-CE, isamukeli soketshezi ifakwe i-valve yokuphepha kanti i-valve inemikhawulo emi-2, yonke imikhumbi yengcindezi inesitifiketi se-PED .........
Ukuqinisekisa isikhathi semishini esisebenza isikhathi eside, sihlala siphakamisa ukuthi amakhasimende athenge izingxenye ezisele kanye nemishini. Amaphampu / ama-motors / izinzwa / ama-contactor / ama-relays atholakala ngamanani amahle kakhulu, ngokufana nokuthi sikhokha malini kubahlinzeki bethu.
Sipakisha imishini yeqhwa emabhokisini wokhuni ajwayelekile, enziwe ngamapaneli anefutha. Ziyamukeleka kuwo wonke amazwe emhlabeni jikelele.
Imishini izoqina kahle emabhokisini okhuni, noma ezitsheni. Sizokwenza ngokucophelela yonke imisebenzi edingekayo ukuvimbela umonakalo odalwe ukuzamazama, ukushukuma endleleni esuka efektri yami iya esikhungweni samakhasimende.
Amafreyimu ensimbi aqinisiwe futhi amapayipi aqina kabili. Ezinye izinkampani zaseChina azikaze zikucabangele lokhu.
Amakhasimende kufanele athathe izithombe ukukhombisa izikali zokucindezela okokuqala ngemuva kokuthola imishini yeqhwa. Uma imishini inezinkinga zokuqhekeka kwamapayipi, ukuqhekeka, ukuvuza kwegesi, sizobakhokhela ukulahleka kwabo.